Abaal marinta laacibka iyo tababaraha Bisha ee Premier League oo la bixiyay – Gool FM
Abaal marinta laacibka iyo tababaraha Bisha ee Premier League oo la bixiyay
Byare September 8, 2017
(England) 08 Sebt 2017. Jose Mourinho ayaa guulo ku hogaamiyay Man United saddexdii kulan ay ciyaartay Premier League iyadoo xitaa wax gool ah laga dhalin balse saas ay tahay kuma guuleysan abaal marinta tababaraha bishii la soo dhaafay ee Agoosto.
Tababaraha naadiga ku cusub sanadkaan horyaalka Ingiriiska Huddersfield ee David Wagner ayaa loo doortay macallinka Bisha.
Kooxda yar ee sanadkaan uun u soo dalacday Premier League ayaa wacdaro dhigtay saddexdeedii kulan ee ugu horreysay, waxay guul ka soo gaareen Crystal Palace iyo Newcastle United halka ay bar baro galeen Southampton.
Dhanka kale abaal marinta laacibka Bisha ayaa waxaa la guddoonsiiyay dhaliyaha Liverpool ee Sadio Mane.
Dhaliyaha reer Senegal ayaa shabaqa gaaray saddexdii kulan ay kooxdiisu ciyaartay Premier League ka hor inta aysan u bixin kulamada caalamiga ah.
Ivan Perisic oo heshiis waqti dheer u saxiixay Inter Milan
DEG DEG: Waaberi oo loo caleemo saaray koobka Degmooyinka